महासचिवज्यू एनआरएनए कसरी साझा मान्ने ? | We Nepali
२०७६ पुष १२ गते २३:३४
लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायतको गत सेप्टेम्बरमा निर्वाचन हुँदा समाज करिब करिब दुई ध्रुवमा बांडियो । पूर्व अध्यक्ष योगकुमार फगामी र अध्यक्षमा पराजित शेरबहादुर सुनार नै एकबाट दुई हुन पुगे ।
तत्कालिन अध्यक्षका उम्मेदवार कृष्ण तिमल्सेना (हाल यूरोप उपसंयोजक) लाई पराजित गर्न फगामीको साथ दिंदै एक ठाउँमा उभिएका सुनार र फगामी दुई नदीका किनार जस्तै भएपछि समाज विभाजन झनै बढेर गयो । त्यसको बाछिटा एनआरएनए यूकेको करिब तीन महिनाअघि सम्पन्न निर्वाचन सम्म आईपुग्दा अध्यक्षका प्रत्यासी सुनार र पुनम गुरुङको नाममा विभाजित भयो ।
त्यसवीचमा सधैं निर्वाचन चाहने र त्यही निर्वाचनलाई उपयोग गरी दुई चार पैसा गोजीमा हाल्ने तथा समाजमा शक्तिशाली भएको भ्रम छर्ने (केही बदनाम व्यक्तीहरु) को प्रवेशले विभाजन झन फराकिलो भयो । जसको असर अहिलेसम्म जारी छ । एनआरएनए यूके महासचिव फडिन्द्र भट्टराईले हालै वीनेपाली डटकममा एक आलेखमार्फत ‘एनआरएनए साझा मानौं’ भनेर अनुरोध गर्नुभएको रहेछ । त्यो आलेख अध्ययन गरेपछि मेरो मनमा केही प्रश्नहरु जन्मिए ।
पत्रकार, कवि, साहित्यकार इत्यादिका रुपमा परिचित भट्टराईजीलाई लेख्न र भाषण गर्न जति सजिलो छ, समाजलाई एकताको सूत्रमा बाध्य निकै गाह्रो छ भन्ने कुरा थाहा नभएको होइन । भट्टराईजी महासचिव पदमा निर्वाचित भएबाट नै नेपालमा जान डेलिगेटसका नामहरु तीनपटक भन्दा बढी परिवर्तन भए । जबकी तपाईं स्वयंले औपचारिक रुपमा बुझबुझारथ गर्नु भएको थिएन । आँफैले गलत परम्पराको सुरुवात गरेर समाज विभाजनको रेखालाई तन्काउने काम शुरु गर्नु भएको थियो । त्यो कसको स्वार्थमा भए ? तपाई पहिला जवाफ दिनु पर्ला अनि तपाईंसँगै चुनावी मैदानमा भएका र तपाई आँफैले चुनावताका भोट मागेका बेलायती नेपाली समुदायका अग्रजहरुको नाम काटेर केही स्वार्थी मानिसका इसारामा कुन हातले ति व्यक्तिहरुका नाम काट्नु भयो ? त्यो कसको स्वार्थमा थियो । त्यो पनि सार्वजनिक रुपमा प्रस्ट पार्नुहोस् ।
एनआरएनएलाई साझा संस्थाका रुपमा विकास गर्नु त्यसको निर्णय पारदर्शीताका कुराहरु आउँछन् । अहिलेसम्मका तपाईहरुका गतिविधि हेर्दा पारदर्शी भन्दा अपारदर्शी निर्णयहरु धेरै भएका छन् । अनि यहाँको समाजले तपाईको टिमले नेतृत्व गरेको एनआरएनएलाई कसरी साझा मान्ने ?
पछिल्ला केही दृष्टान्तलाई हेर्नुहोस् । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसीसी) पहिलो बैठकले पहिलो चरणमा अध्यक्षमा पराजित कुल आचार्य, एनआरएनए अभियन्ताहरु विश्वआदर्श पण्डित र सोम सापकोटालाई सल्लाहकार मनोनयन गर्दा एक थान विज्ञप्ति जारी गर्न तपाईंका हात किन चलेनन् ? तपाईंलाई निर्वाचनमा सहयोग गरेनन् भनेर कि निर्वाचनमा सहयोग गर्नेसँग वोलचाल बन्द थियो भनेर । कि अरु नै कारण थियो ?
तर, गत साता एनआरएनए आइसीसीले भक्त गुरुङलगायत ८ जनालाई विभिन्न पदमा मनोनयन गर्दा औपचारिक पत्राचार प्राप्त नभई किन हतारिएर विज्ञप्ति निकाल्नु भयो । यसको मतलव तपाईंलाई चुनावमा सहयोग गर्नेले नियुक्ति पाउँदा मात्र विज्ञप्ति आउने हो ? होइन भने पहिलो ढिलो विज्ञप्ति आएकोमा क्षमा याचना गर्नुहोस् । यस्तो भन्दा यो लेखकलाई आचार्य वा पण्डितका मान्छे भएको आरोप नलागोस् । मैले भन्न खोजेको कुरा समान व्यवहार र आत्मसम्मानको हो । एनआरएनएलाई साझा बनाउने हो भने सबैले अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने व्यवहार प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । त्यो भोली तपाईंमाथि पनि लागू हुन सक्छ । नत्र कुन मापदण्डमा फरक फरक व्यवहार गरियो स्पष्ट पारिदिनुहोस् ।
त्यस्तै, पूर्व कोषाध्यक्ष सचिन श्रेष्ठले कोषको रकम स्पष्ट पार्न नसकेको र धेरै हिनामिना भएको खवर बाहिर आएको छ । त्यस बारेमा एनआरएनएले कहिलेसम्म स्पष्ट हिसाव सदस्य सामु ल्याउँछ मिति तोक्नुहोस् ।
अनि, एनआरएनए यूकेको बैठकले कोअप सदस्यमा कुन मापदण्डका आधारमा सदस्यहरु र प्रवक्ता नियुक्ति गरेको हो बेलायतस्थित नेपाली समुदाय जान्न चाहन्छन् । उपाध्यक्ष पराजित मानिस को-अप सदस्यमा मनोनयन तर महिला अध्यक्ष भएको बेला एक जना पनि महिला मनोनयनमा नपर्ने कस्तो विडम्बना ? यस्तो एनआरएनएलाई महिलाले कसरी साझा मान्न सक्लान् ? एनआरएनए यूके अध्यक्ष पद महिलाले पाउँदा महिलाहरु सामाजिक संस्थामा आउन सजिलो हुन्छ भनेर दैनिक भाषण गर्नु हुन्थ्यो । पुनम गुरुङ एनआरएनए अध्यक्ष भएपछि गरिएका मनोनयनमा कति जना महिलाले अवसर पाए कृपया सार्वजनिक गरि दिनुहोस् ।
यूकेदेखि केन्द्रसम्मका महत्वपूर्ण निर्णय लिंदा जाति र लिङगलाई ध्यान दिनु पर्दैन ? के यसै गरि चलिरहेको एनआरएनए यूकेलाई सबैले साझा बुझ्नु पर्ने हो वा तपाईंहरुले जे गरे पनि दुई हातले ताली बजाएर समर्थन गरेर साझा भयो भन्नुपर्ने हो ? कृपया झर्को नमानी जवाफ दिनुहोला ।
एकातिर संगठनको स्रोत सदस्यलाई मान्ने, अर्कातिर अध्यक्ष र महासचिवले बिना बैठक खल्तीबाट निकट व्यक्तिलाई पदको टिका लगाउने र सिफारिस गर्ने दोहोरो कुरा बन्द हुनुपर्छ । पहिलो पटक महिलाले नेतृत्व गर्दा कम्तिमा एक जना महिला मनोनयनमा पर्दा एनआरएनए यूकेलाई के घाटा हुन्छ ? त्यो पनि बताइदिनु हुन्छ कि ?
बेलायत जस्तो मुलुकमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि दूताबास यहीं छ । एनआरएनए मात्र आधिकारिक संस्था हो भन्ने भ्रम महासचिवजीले पाल्न जरुरी छ जस्तो लाग्दैन् । यो पंक्तिकार कुनै पद वा मनोयनको दावेदार भने पटक्कै होइन । तर, संस्था साझा बनाउने हो भने सबैसँग छलफल गर्नुहोस् । हातेमालो गर्नुहोस् अनि साच्चै एनआरएनएलाई साझा मानौंला ।